शिबा इनु बेच्ने समय हो? यो 2022 मा उत्कर्षमा रहेको संकेत - Shiv's Era
शिबा इनु बेच्ने समय हो? यो 2022 मा उत्कर्षमा रहेको संकेत
शीर्ष क्रिप्टोकरन्सीको ग्राउन्ड लेभलमा पाउनुहोस्
अत्यधिक मूल्यवान क्रिप्टोबाट बच्नुहोस्
बढ्दो प्रवृत्तिको लहरमा सवारी गर्नुहोस्
सुरक्षित र लाभदायक लगानी गर्नुहोस्
शीर्ष6संकेतहरू जुन SHIB बेच्नको लागि तयार छ
शिबा इनुले मेमे सिक्का राजाको रूपमा शीर्ष स्थानमा आफ्नो छोटो जित पछि ख्याति कमाए। सिक्काले २०२१ को दोस्रो त्रैमासिकको सुरुदेखि लगभग ७००% को ठूलो वृद्धि देखेको छ र डोगेकोइनलाई प्रतिद्वन्द्वी देखेको छ। तर यो र्‍याली २०२१ को अन्त्यमा अचानक बजार क्र्यासको कारण समाप्त भयो। यस लेखमा, हामीले लगानीकर्ताहरूको लागि २०२२ मा SHIB बेच्ने समय आएको संकेत गर्ने यस्ता शीर्ष संकेतहरू सूचीबद्ध गरेका छौं।
शिबास, ईओएस र नरभक्षी अर्थव्यवस्था
शिबा इनु समर्थकहरूले डिसेम्बर र नोभेम्बरमा क्रमशः 239 मिलियन र 400 मिलियन टोकन नष्ट गरेका छन्। तर तिनीहरूले जति टोकनहरू जलाए पनि, माग सम्भावित रूपमा उच्च दरमा घटिरहन्छ।
Dapp समीक्षा: SHIB टोकनहरूको माग यसको आधारभूत कुराहरूले धेरै प्रभावित छ
SHIB टोकनहरूको माग यसको आधारभूत कुराहरूले ठूलो प्रभाव पारेको छ। शिबा इनुका आधारभूत र कार्यात्मकताहरू अझै कमजोर छन्, जसले गर्दा सञ्जाललाई बढ्दो शुल्कको सामना गर्नु परेको छ, जुन प्रति स्थानान्तरण US$30 बढ्यो।
Shiba Inu एक ERC-20 टोकन हो, र यो Ether को blockchain को शीर्ष मा निर्मित छ
शिबा इनु एक ERC-20 टोकन हो, जुन ईथरको ब्लकचेनको शीर्षमा बनाइएको छ। जबकि यसले यसलाई Ethereum नेटवर्क र यसमा चलिरहेको DApps सँग अन्तरक्रियात्मक बनाउँछ, यो ठूला ब्लकचेनको सीमितताहरूद्वारा सीमित छ।
OpenSea: कसरी सिलिकन भ्यालीमा केही कुकी केटाहरूले गोप्य रूपमा एक एक्सचेन्ज सिर्जना गरे जुन पूर्ण रूपमा प्रभावशाली छ
लामो अवधिमा एक सिक्काको वैधताको लागि, त्यहाँ वास्तविक-विश्व उपयोगिता हुनु आवश्यक छ। Shiba dApps बजारमा धेरै पछाडि छ, जस्तै Uniswap, OpenSea, र Axie Infinity, प्रयोगका केसहरू र यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा।
त्यहाँ धेरै क्रिप्टोकरन्सीहरू छन् जसले फिएट मुद्राहरू प्रतिस्थापन गर्न धम्की दिन्छ। तर त्यहाँ अझै कुनै प्रमाण वा अनुमान छैन
त्यहाँ धेरै क्रिप्टोकरेन्सीहरू छन् जसले फिएट मुद्राहरू प्रतिस्थापन गर्न धम्की दिन्छ। तर शिबा इनुले आउँदो वर्षहरूमा कुनै संस्थागत ग्रहणको सामना गर्नेछन् भन्ने कुनै प्रमाण वा अनुमान छैन। SHIB धारकहरूको लागि, अस्थिरता अझै पनि एक प्रमुख मुद्दा हो।
के Shibes टोकन Bitcoin फिर्ता होल्डिंग छ?
टोकनमा उपयोगिताको कमी छ र धेरै थोरै खाताहरूमा केन्द्रित छ, दुवैले लगानीकर्ताहरूको लागि पर्याप्त जोखिम सिर्जना गर्दछ। यदि ती टोकन धारकहरू मध्ये थोरैले नगद आउट गर्ने निर्णय गरे भने, शिबा इनुको मूल्यहरू उल्लेखनीय रूपमा घट्न सक्ने घटना हुन सक्छ।
शिबोकेन मेमे सिक्काको उदय
शिबा इनु बजारमा सबैभन्दा ठूलो मेम सिक्का मानिन्छ। क्रिप्टोसँग पनि ठूला प्रतिस्पर्धीहरू छन्, Dogecoin बाहेक, जसमा समावेश छ। Ethereum, Solana, र Cardano, लोकप्रियता प्राप्त गर्दै छन्।
Bitcoin – $3 ट्रिलियन क्रिप्टो को बजार पूंजीकरण
बिटक्वाइनले केही महिनामै सम्पूर्ण क्रिप्टो बजारको मूल्य अमेरिकी डलर ३ ट्रिलियनमा पुर्यायो। शिबा इनुसँग लाभको लागि धेरै सीमित सम्भावनाहरू छन्, लगानीकर्ताहरूलाई क्रिप्टोको साथ बोर्डमा जान निरुत्साहित गर्दै।
के दीर्घकालीन SHIB लगानीकर्ताहरूले पौडी खेल्न बन्द गर्नुपर्छ?
लामो अवधिको SHIB लगानीकर्ताहरूले महसुस गर्दैछन् कि यो माथि तिर जान प्रयास गर्नु व्यर्थ छ। क्रिप्टोले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छैन, र यसको सफलताको सम्भावना प्रत्याशित भन्दा धेरै कम छ। यद्यपि, क्रिप्टो धारकहरू विश्वास गर्छन् कि भविष्यमा शिबा इनुले आफ्नो वास्तविक क्षमता प्रकट गर्न फिर्ता बाउन्स गर्नेछ।